क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पाण्डे र चन्दको दाबेदारी, कसको पल्ला भारी? :: Setopati
क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पाण्डे र चन्दको दाबेदारी, कसको पल्ला भारी?
सीताराम कोइराला काठमाडौं, असोज ८
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आगामी शुक्रबार र शनिबार हुने निर्वाचनमा विनयराज पाण्डे र चतुरबहादुर चन्दले नेतृत्वका लागि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाली क्रिकेटमा लामो समय नेतृत्वमा रहेका पाण्डे सन् २०११ यता नेपाली क्रिकेटको प्रशासनीक निकाय क्यानमा छैनन्। चन्द चार वर्षअघि क्यानको अध्यक्षमा चुनिए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिएको थिएन।
खेलकुद परिदषद्ले चन्दलाई मान्यता नदिएर रमेश सिलवालको नेतृत्वमा अर्कै समिति बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले २०७३ वैशाखमा क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो।
त्यहिँ निलम्बन फुकुवा गर्नका क्यान निर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचित क्यानको केन्द्रीय समितिले अनुरोध गरेपछि आइसिसीले निलम्बन फुकुवा गर्नेछ। आगामी असोज २६ गते अस्ट्रेलियामा बस्ने आइसिसीको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव गए निलम्बन फुकुवा हुनेछ।
क्यानको निर्वाचनमा ५९ जना भोटर रहेका छन्। प्रत्येक जिल्ला क्रिकेट संघबाट आएका ३९ जना र प्रदेशबाट छनोट भएका २० जनाले १७ सदस्यीय क्यानको केन्द्रीय समितिका लागि मतदान गर्नेछन्।
जसमा चन्द समूह बलियो देखिएको छ। चार वर्षअघि प्रतिनिधि बनेका अधिकांस सदस्य अहिले पनि निर्वाचनका लागि छनोट भएका छन्।
'चार वर्षअघि प्रतिनिधि रहनु भएका ९० प्रतिशत भन्दा बढी अहिले पनि निर्वाचनका लागि आउँदै हुनुहुन्छ,' अध्यक्षका दाबेदार चन्दले भने, 'पुराना साथीहरुले फेरि पनि हामीलाई मत दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ।'
लामो समय नेपाली क्रिकेटको नेतृत्वमा रहेका पाण्डे आफ्नो योगदानलाई कदर हुने बताउँछन्।
'जिल्लाका अधिकांस साथीहरु क्रिकेटमै लागेका हुनुहुन्छ। उहाँहरुले मैले क्रिकेटमा दिएको योगदान र भविष्यमा क्रिकेटका लागि गर्न सक्ने काम हेरेर मत दिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो, ' पाण्डेले भने।
२ जना मात्र अध्यक्षमा उठेको अवस्थामा विजयी हुन चाहिने ३० मत आरामले आउने चन्दको आँकलन छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रेमश सिलवानको समर्थन पाए पनि पाण्डे भोटिङमा कमजोर देखिएका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष १–१ जना हुनेछन्। बाँकी १३ जना सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आफ्ना २ जना सदस्यलाई पदेन सदस्यका रुपमा मनोनित गर्ने बाहेक सबै निर्वाचित हुनु पर्नेछ।
परिषद्बाट आएका सदस्यलाई केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय साधारण सभामा मतदान गर्ने वा निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछैन। क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितीको कार्यकाल ४ वर्षका लागि हुनेछ।
निर्वाचनअघि चन्दले पाण्डेसँग समेत छलफल गरेका छन्। 'हामीले उहाँलाई संरक्षक बनेर सहयोग गर्ने आग्रह गरेका थियौं,' चन्दले भने, 'तर उहाँले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको पछि थाहा पाएँ।'
तेस्रो शक्ति निर्णायक बन्ने दाबी
अध्यक्षमा पाण्डे र चन्दले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा प्रदेश १ को प्रादेशीक क्रिकेट संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मिङ्गमा डण्डु शेर्पा निर्वाचनमा आफू निर्णायक भएको दाबी गर्छन्।
'सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं,' शेर्पा भन्छन्, 'निर्वाचन हुने अवस्था आएमा हाम्रो मत निर्णायक हुनेछ।' शेर्पाले आफ्नो पक्षमा २० मत रहेको पनि दाबी गरे।
शेर्पाले अहिले पाण्डे समूहसँग छलफल गरिरहेको छ। पाण्डेले उचित पद दिएको अवस्थामा मिलेर निर्वाचन लड्ने शेर्पाको भनाइ छ।
तर पाण्डेले शेर्पा समूहसँग छलफल गरेको विषयमा अहिलेसम्म केहि खुलाएका छैनन्। चन्द समूहसँग भने कुनै छलफल नभएको शेर्पाले बताए।
यता क्यानका पूर्वउपाध्यक्ष विनोद मैनालीले दुवै तिरको प्यानलमा पर्न छलफल गरेका छन्। मैनाली चन्द अध्यक्ष रहेको समितिको उपाध्यक्ष थिए।
चन्द र पाण्डेसँग कुरा नमिलेको अवस्थामा शेर्पा र मैनालीले पनि अर्को समूह बनाउने सक्ने सम्भावना पनि छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ८, २०७६, ०४:५८:००